Sonke singamaRashiya, siyazi kahle ukuthi inkohlakalo yenkqubo yokuphoqa umthetho kanye nokungapheleli kwayo:
- Amaphoyisa asebeyizikhulu, njengamaphoyisa, ngenxa yokufumbathisa ukukhulula abaphula umthetho womthetho;
- abacimi bomlilo kanye nabahloli abavela eMnyango Wezephuthumayo ngemali baphenduka ekuphukeni okungaqondile kwamazinga okuphepha;
- Ukulinganisa izikali ngesifumbathiso esithile noma efonini "evela phezulu" kuya ohlangothini lomhlanganyeli ojulile futhi oqinile;
- opharetha, abaphenyi nabaphenyi bokunikeza amacala, ukukhulula izigebengu esitokisini futhi bahlanganyele ekuhlaselweni kwe-raider ...
Ngokungangabazeki, akubona bonke abaqeqeshi bemithetho ababandakanya "ezenzweni" ezichazwe ngenhla, kodwa ngokusho kwemibono yemibono, abantu bethu ngobuningi obukhulu bakholelwa okuphambene nalokho.
Izakhamizi ziveza ukungathembeki okukhethekile emisebenzini ye "imizimba" evela emkhakheni wobulungiswa bezobugebengu, lapho "umthumeli wezomthetho kanye nomphenyi" egaxa izinhloso zabantu, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izizathu zokungabi namlandu noma okunye okudingekayo komthetho ngokufaneleka kwezenzo.
Ezimweni ezinjengaleyo, ummeli wezinsolo zobugebengu uyadingeka, ozoqapha ngokucophelela ukugcinwa kwamalungelo nenkululeko yomthengi wakhe, alwele inkululeko yakhe, futhi ngeke avumele "ukudlula" okungaphezu kwalokho. Nakuba abaphenyi, abashushisi nezinkantolo baphazamisa ngokuqinile omeli, bengayinaki imiyalelo yenkambiso yenqubo yobugebengu emiphakathini ephikisanayo futhi bebenzela isimiso "sokugeza izandla," umvikeli omuhle futhi oqeqeshiwe uyazi kahle indlela yokuvimbela ukungahloniphi okunamandla.
Ingabe ummeli awunamsebenzi ohlelweni lobugebengu, ungabonakala kanjani ekuqaleni?
Abanye abantu ababhekene nezilingo zobugebengu njengezisulu noma abasolwa bangathi: ukusebenza kommeli ezweni lethu kuphansi.
Kodwa-ke, angifuni ukuvumelanisa nalokhu kukhishwa - kunesimo esingaguquguquki ezindabeni zezinkantolo - bonke labo abaye badlulisela inkantolo bahlala behlukaniswe izingxenye ezimbili - "banelisekile" futhi "banelisekile", kuyaqondakala - izifiso zomuntu zisekelwe, omunye umuntu akayikho.
Kukhona abameli-okungeziwe, okukhanga ukuhlinzeka ngamasevisi ngendleko yezwe. Yilaba bameli abadala izinkolelo eziphathelene nokungabi namsebenzi kommeli ezinkambisweni zobugebengu. Abatholi imali futhi ngaleyo ndlela balungisa ukungenzi lutho, okuyinto ukwephulwa ngokweqile kwezimiso zokuziphatha kobuchwepheshe bommeli ! Yiqiniso, noma yikuphi umsebenzi okufanele ukhokhelwe, kodwa ummeli ochwepheshe obona iklayenti elihluphekile noma elidingayo akufanele abuyele kuye. Yena, njengodokotela, ubophezelekile ukukhombisa zonke izimfanelo zakhe namakhono ekuxazululweni okulungile kwalolu daba nensindiso yokuphila komuntu.
Ummeli ozinikezele ngokugcwele emsebenzini wokusebenza akukhona nje okhona ezenzweni zokuphenya noma enkantolo yokulalelwa kwecala, uhlaziya ngokuphawulekayo ubufakazi bokufakazela ubufakazi futhi ubonisa lokhu ngezikhalazo nezikhalazo, efuna imiphumela.
Kuyafaneleka futhi ukucabangela lapha iqiniso elibalulekile lokuthi ezimweni eziningi abantu abasolwa noma abasolwa bayabandakanyeka ezenzweni ezithintekayo.
Kodwa-ke, abafuni ukuthwala umthwalo wemfanelo futhi balindele ukuthi ummeli abe isimangaliso, noma kunalokho, ukuthi "uyazibamba." Lena indlela engalungile kakhulu, njengoba enkantolo, lapho ithola umusho, ngokushesha iqala ukwenza izicelo, ihlambalaza umvikeli wayo futhi iwasoze ngokungabi nalutho noma ukungenzi lutho. Phakathi naleso sikhathi, umsebenzi wommeli ocaleni lobugebengu ukunciphisa isijeziso futhi uma kwenzeka ngokusobala engekho ukubandakanyeka kwekhasimende lakhe, ukufuna ukulungiswa okuphelele. Kuwubuwula ukukholelwa ukuthi uma kukhona izinkomba ezithile, kungenzeka ukugwema "isikhathi esinqunyiwe", kodwa ukuthola okungaphansi kwalokho okushiwo, mhlawumbe, kulesi simo cishe usindiswe.
Yingakho ummeli esecaleni lobugebengu engekho okhethwayo, kodwa osebenza ngokuphumelelayo futhi ophumelelayo ozoqapha umthetho, ukuqinisekisa ukugwetshwa okulungile!
Indlela ukuqinisa imisipha sangasese? amasu ukusebenza futhi umzimba
Aleksander Emelianenko: tattoo (isithombe). Yini tattoo Aleksandra Emelyanenko?
Elizabeth Hurley: ifilimu, impilo yomuntu kanye namaqiniso athakazelisayo mayelana nomdlali odumile